Our Chairman – MIDQARAN
Taba bare maskaxeed oo u istaagay tayeynta wax barashada qaranka
Wax ka ogow taariikh nololeedka gudoomiyaha xisbiga Midqaran
Dr. Abdinur Sheikh Mohamed
Taariikh nololeedka gudoomiyaha Xisbiga Midqaran
Gudoomiyaha Xisbiga Midowga Qaranka Soomaaliyeed oo loo soo gaabiyo Midqaran Dr. Abdinur Sheikh Mohamed, waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho.
Gudoomiyahu Waxa uu waxbarashadiisii malcamadda iyo schoolka hoose kusoo qaatay isla magaalada Muqdisho, dugsiga hoose ee Hodan iyo dugsiga dhexe ee 21ka October. Waxa uu ka baxay machadka tababarka macallimiinta oo uu noqday macallin u shaqqya Wasaaradda Waxbarashada isagoo bare ka ahaa dugsiyada dhagaxtuur iyo Xamar ee magaalada Muqdisho. Dr. Abdinur waxaa uu ku biiray Jaamicadda Lafole sannadkii 1980kii isagoo ku takhasusay maadooyinka Xisaab iyo Fisikis. Dr. Andinur waxa uu macallin ka noqday dugsiga sare ee Xanaanada Xoolaha ee Km7.
Gudoomiyahu markii uu lafoole ka baxay ayuu dalka dibeddiisa u dhoofay isagoo waxbarsho dheeri ah u raasaday dalka Mareykanka. Intii uu ku noolaa dalka Mareeykanka waxaa uu laba shahaado oo Masters ah iyo Ph.D. ka qaatay Jaamicadda Ohio University. Dr. Abdinur wuxuu ku takhasusay hoggaaminta iyo maamulka guud ee waxbrashada (Educational Leadership and Administration).
Gudoomiyaha xisbiga Midowga Qaranka Soomaaliyeed Dr. Abdinur waxa uu kasoo shaqeeyey wasaradda waxbarashada ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka, waxa uu sidoo kale bare jaamacadeed ka ahaa jamacadaha Ohio University iyo Otterbein College oo kawada tirsan gobolka Ohio.
Sidoo kale Gudoomiyuhu waxa uu kasoo shaqeyey siyaasadda dalka uu kasoo noqday wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukumaddii Tayo sanadkii 2010-2011. Xiligaas waxa lagu xasuustaa sida uu u maareeyey imtixaanadii dalka gudahiisa iyo dibeddiisa looga qaaday oo arday qaxooti ku ahaa dalka dibeddiisa ay fursad u heleen in ay ka qeybqaataan.
Waxa uu aradada Soomaaliyeed imtixaan ugu qabtay goobo kala duwan si ay uga wada faa’ideystaan deeqdaas waxbarasho, sida magaalada muqdisho ee caasimadda dalka, xeryaha qaxootiga Kenya iyo magaalada Adis Ababa ee dalka Ethopia halkaas oo ay ku sugnaayeen arday Soomaaliyeed oo farabadan una baahnaa fursad waxbarasho. Gudoomiyahu waxa uu maamule ka ahaa hay’ad waxbarasho iyo horumar (education and development) oo la shaqeeya hayadaha UNESCO, FAO, EU, World Bank iyo kuwo kale.
Mudooyinkii danbe, gudoomiyuhu waxa uu ku mashquulaanaa siyaasadda dalka. 2014 waxa uu aasaasay dhaqdhaqaaqii “Uistaag Soomaaliya”, waxa uu shacabka Soomaaliyeed kula hadlay goobo kala duwan, dhaqdhaqaaqaas oo ugu danbeyn isku badalay Xisbiga Midowga Qaranka Soomaaliyeed oo marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaan “Midqaran” ee uu gudoomiyaha ka yahay. Mudadaas uu gudoomiyahu shaqeynayey waxa uu ku sifoobay hufnaan iyo daacadnimo, oo ah labo astaan oo si weyn looga baahanyahay hoggaanka siyasaadda Soomaliya si umadda looga saaro xaaladda cakiran oo ay mudada kusoo jirtay. Sidaas darteed, gudoomiyaha xisbiga Midqaran Mudane Dr. Abdinur Sheikh wuxuu isu Soo taagayaa in uu helo kalsoonida xubnaha Xisbiga oo uuna u tartamo in uu noqdo murashaxa madaxweyne ee xisbiga Mudqaran ee sanadka 2021 haddii Allah SWT raali ka noqdo.
In la guuleysto alle ka sokow, waxa ay ku xirantahay adigan aqrinaya taariiqda murashaxa in aad qeyb ka noqoto olalaha Uistaag Soomaaliya ee xisbiga Midqaran iyo sidoo kale taageeradaada oo nooc walba leh hadii aad u aragtay in xisbiga Midqaran ee uu hoggaamiyo Dr. Abdinur Sheikh Mohamed uu yahay shaqsigii dalka samata bixin lahaaa kuna jiheeyn lahaa wadadii nabadda, horumarka oo ay Soomaaliya ku gaari lahayd masiirkeeda qarannimo.
© All rights reserved. MIDQARAN